IQoption မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - iqoption အကြောင်းကိုကုန်သည်များရှိဘုံမေးခွန်းများကို
အဘယ်သူမျှမအမှားနှင့်အတူ Neteller အကောင့်ကို အသုံးပြု. IQOption သိုက်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
cryptocurrency ဂယက်ကဘာလဲ? ဂယက်ထကုန်သွယ်မှုဘယ်မှာရှိသနည်း
cryptocurrency Dash ကဘာလဲ? Dash ကုန်သွယ်မှုဘယ်မှာရှိသနည်း
ငါသည်ငါ့ Neteller အကောင့်များနှင့် Skrill မှထုတ်ယူသောအခါ, status ကိုစိစစ်အတည်ပြုလိုအပ်ပေသည်။
အဘယ်ကြောင့် iqoption အပေါ်တစ်ဦးရုပ်သိမ်းအောင်ထက်တစ်သိုက်ကိုပိုပြီးပိုမိုလွယ်ကူအောင်သလဲ?
အဘယ်ကြောင့်ကုန်သည်များ IQOPTION တခုတခုအပေါ်မှာ option ကိုဝယ်ယူရန်မတတ်နိုင်တခါတရံရှိပါသလဲ
cryptocurrency Litecoin ကဘာလဲ? Litecoin ကုန်သွယ်မှုဘယ်မှာရှိသနည်း
cryptocurrency Ethereum ကဘာလဲ? Ethereum ကုန်သွယ်မှုဘယ်မှာရှိသနည်း
အရင်ကဆိုရင်နှင့်အဆင့်မြင့်ကုန်သည်များများအတွက် IQOPTION အပေါ်ရရှိနိုင်ပါကဘာလဲ tools များရှိပါသလဲ
အဘယ်သို့ငါအိုင်ကျူ Option ကိုထံမှ OTN တိုကင်ရနိုင်မလဲ?
Bitcoin နှင့် Bitcoin ငွေသားဆိုတာဘာလဲ? ကကုန်သွယ်မှုအဘယ်မှာရှိသနည်း
Standard မေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)
ဒွိ option ကိုကဘာလဲ?
ဘယ်လောက်ကြာ dows ကရန်ပုံငွေရုတ်သိမ်းဖို့ယူ?
The representative of our Company might ask you to send us some scanned documents, depending on the withdrawal method. All the information will be sent to your e-mail.
We offerafull range of financial instruments, ranging from equities, to indices, commodities and currency pairs freely traded on world and national exchanges and markets.
The expiration price is the price of the asset at the expiry of the time specified in the option. It is calculated according to the formula (Bid + Ask) /2.
Ask is the price at which the seller is willing to sell the financial instrument. It is always bigger than the “Bid” price.
Bid is the price the buyer is willing to pay forafinancial instrument. It is always less than the “Ask” price.
တစ်ဦးထား option ကိုကဘာလဲ?
A put option is anaoption that provides the trader withapredetermined profit when the underlying asset at the time of expiration is lower than when it was purchased.
Asset isacommodity, index, stock, or currency pair that can be traded asabinary option.
ဖုန်းခေါ် option ကိုကဘာလဲ?
A call option is an option that provides the trader withapredetermined profit when the underlying asset at the time of expiration is higher that at the time it was purchased.
ထို option value ကိုကဘာလဲ?
The option value is the price at whichatrader acquires an option.
If the option is closed “in-the-money” (the strike price is higher or lower than the expiration price, depending on the type of the option), you getaguaranteed profit specified in the option.
နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှု expity နှုန်းငွေပေးငွေယူနှုန်းဖို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
The option expires At-the-money and the investment amount is returned to the investor.
IQ OPTION UP-TO-DATE OFFICIAL FAQ